Ilaina maika ny fanohananao. Amin'ny fampidirana ity tranokala ity dia manohana ny asan'i Martin Vrijland ianao amin'ny fanomezana. Raha mila olona an-tapitrisany koa ianao hitandrina ny vaovao samy hafa isan-taona, dia ny fandraisana an-tanana indrindra no raisinay. Anjaranao aminao ny hoe maniry ny hanome. Amin'ny fiarahanao manampy anao hanampy ahy hiaraka ary hiady ho an'ny fahalalahana izahay.
Kortingscode	- Miankina - tsy mandaitra
Total visits: 1.440.285